Mayelana neLibra Udokotela uClave Owen
Unqulo & Umoya Ngeenkwenkwezi
UClave Owen: I-Acra Actor
Umdlali weNgesi uClave Owen wazalwa ngo-Oktobha 3, 1964 eCovenry, e-UK
Ungumfana wesine kwintsapho yabazalwana abahlanu.
Uyise, umculi-western-country, washiya intsapho xa uClave ebesithathu.
Emva kokudlala i-Art Dodger e- Oliver eneminyaka eyi-11, wagqiba ekubeni ngumdlali.
Baqeshwe kwiRoyal Academy yeDratic Art ngo-1987, kwiklasi kunye noRalph Fiennes noJane Horrocks.
Watshatile ukususela ngo-1995 waya kuSara Jane Fenton.
Unentombi ezimbini, uHana noEva.
Leli gama lenye yebalandeli bakhe kwaye yindlela enye yokuchaza ubunjani be-paradoxical ye- Libra Sun inkwenkwezi. Ngokuqhelekileyo udlale indoda yendoda, eneenwele eziphazamisayo kunye ne-5 yintsimbi, amehlo agxininiswe emsebenzini weHerculean, kungekhona kwisibuko.
Sekunjalo ukhangelelwe ngaphambili etaweni ye-catwalk, egqoke izikhwama ze-Armani ezifakwe nguGiorgio ngokwakhe, kwaye amehlo akhe aluhlaza ngoku akhangele kwiintengiso kumveliso yokunakekelwa kwe-cologne kunye neyesikhumba. ULibras uyayithanda izinto ezintle, kwaye uyanconywa ngenxa yobukeka kunye nesitayela. Udlale ininzi yabantwana abanobunzima, kodwa njengeLibra yinyani idityaniswe kwintetho yokuzibonakalisa kwe-Self.
Inyanga kaClive eseVirgo, emnika ingqondo yokugcina - akayikuziyeka. Njengenkwenkwezi yeTV yaseBrithani ekuqaleni komsebenzi wakhe, wayenomsebenzi okhuselekileyo we-run-ins kunye nomgcini we-press, oye waziva engena ngasese.
I- Virgo Moon inyusa isidingo sokuba yedwa, akunakwenzeka njalo ukuba uyinkwenkwezi enkulu, njengoko wayese-1990s ngendima yakhe kwi-BBC bonisa, iChancer . Uthetha ngomfazi wakhe ukugcina intsapho ibuyele ekhaya, kwaye mhlawumbi ilitye lokuthinteka kwengqondo xa ihleli, kude nawuphi na umvo wesiqu.
Inyanga e namandla
NjengoNawom Watts noLiev Schreiber, uClive wazalwa phantsi kwe-Pluto / Uranus ngokubambisana kwama-60. Ukuba eVirgo, kukho umgangatho wendalo, othembekileyo kwizenzo zakhe, kunye neeplanethi zendalo, iimpembelelo zabantu.
Iinyanga zakhe zihambelana nale maplanethi amabini, kumnika ubunzulu obunokumangalisa. Kwiindima zakhe, uthumela umququzelelo wokuzikhukhumeza komzwelo kodwa uthatha nabalinganiswa kwiimeko ezinzima.
I-Pluto-Moon ukudibanisa idala ubudlelwane obunamandla noMama. Xa uyise engekho kumncinci, mhlawumbi umama omdala onomthandayo unomdla omkhulu kwaye unxulumene nokuphila.
Ngelanga neMercury eLibra , akumangalisi ukuba iClive iphuma njengomdlali onobuchule. I-Mercury yakhe, kwi-0 degrees Libra, i-angle ye-trine kwiJupiter yakhe eTaurus.
Oku kuya kumathuba apho angasebenzisa ingqondo yakhe ebukhali kwiindlela ezibonakalayo. Ewe, ukwenza okuthile yindlela enye, kodwa wenza ucoko lwe-screenplay ye- Children of Men kwaye unokufumana isipho sokubhala, ngokunjalo.
Venus yamaTransti kunye neMars
Unayo iVenus eLeo , kwaye ke uyayithanda i-pageantry yoshishino lokubonisa. Unayo izipho zobugcisa bokuzibonakalisa, uhlobo lokudlala kunye nobushushu obuninzi.
Le Venus inqwenela ukukhanya kwaye iyaqhayisa xa ibonisa. UClive uyamomotheka kwiifoto zokushicilela njengokuba uyazi imfihlo, kunye namathuba, malunga nokuzaliseka kokudala kunye nosapho.
Ngo-Mars e-Leo, ukhuthazwa ukwenza izinto eziphucula isimo sakhe emehlweni abo abalandeli bakhe. Utsalwe kwiindima ezimvumela ukuba abe mkhulu kunobomi. Oku kunika umoya we-regal ukudlala ookumkani kunye neenqwelana, kodwa kunye noLovu ukulangazelela ukudlala umthandi.
UClave unet Saturn kwi-Aquarius kuma-degrees angama-29, amdonsa kwimisebenzi yeqela, ngakumbi iimbono. I-movie ekhethiweyo yidolophana yexesha elifutshane, lizele abantu abangabonakaliyo, abantu abadala, kwaye oku kuya kubhenela ukuqonda kukaClive.
Unako ukukhula ngokugqithiseleyo ngokuba yinxalenye yeeprojekthi ezidibeneyo ezibeka iingcamango zangaphambili apho, njengabantwana beMadoda .
Mhlawumbi uzisa ukuqeqeshwa ukudala iingcamango ezintsha kunye neengcamango zangaphambili ngaphambi kwexesha labo.
Ukulinganisa Ubomi Bomibini
Ngentsapho ukuphakamisa ngasenyakatho yeLondon kunye nomsebenzi okhutheleyo njengenkwenkwezi ye-movie, uClave uthe uhlala ubomi babini. Uzukisa umfazi wakhe uSarah Jane Fenton, owayeka ukuhlala ekhaya, ngokugcina ubomi obuzinzileyo bentsapho, ngelixa echitha iiveki ngexesha elide.
Ukubambisana kuxhasa umoya weLibra, kwaye apha ufumene iqabane elenza ulungelelaniso oluqhelekileyo.
"Inxalenye yecala lomzimba yamehlo. Yiloo nto ndiyakholelwayo."
"Ndicinga ukuba ndithandwa kakhulu kubalinganiswa nge-subtext, nokuba yintoni na kwaye akudingeki ukuba babe nobuhle, kodwa kufuneka bamele babe ngabantu."
"Ubuzali kunye nosapho kuza kuqala kum, kwaye xa ndingasebenzi, ndipholile ngeTeletubbies."
"Ndiyathanda ukuqhubeka ndiyingxaki, yigcine ihlukile. Yinto yobugcisa, kwaye ndizama rhoqo ukufunda nokuphucula kuyo."
Yintoni ongayilindela kwi-Mercury Retrograde
Iimpawu zoMoya zeZodiac
I-Jupiter Sign Table ukuya ku-2022 - Fumana zakho
Oko Kufuneka Ukwazi Ngeziganeko Ezixilisiweyo kwiNkwenkwezi
Umlinganiselo weMbali yeMifanekiso yeMifanekiso
Ukudlala njani i-Hogies (okanye i-Hogans) I-Golf Bet
Imfazwe Yehlabathi II: USS Ukhuphe (CV-11)
I-University of Whitworth